Amasirinji Alahlwayo Ezokwelapha anezakhiwo kanye nesakhiwo: Lo mkhiqizo wenziwe ngomgqomo, i-plunger, ipiston kanye nenaliti.Lo mgqomo kufanele uhlanzeke futhi ube sobala ngokwanele ukuze ubonwe kalula.Umgqomo nepiston kufanelana kahle futhi inendawo enhle yokushelela, futhi kulula ukuyisebenzisa.Umgqomo osobala kulula ukukwazi kahle i-volumn futhi umgqomo obala futhi kulula ukusula ibhamuza.I-plunger ihanjiswa kahle ngaphakathi komgqomo.
Umkhiqizo uyasebenza ukusunduza ikhambi emthanjeni wegazi noma we-subcutaneous, futhi ungakhipha igazi emzimbeni womuntu emithanjeni.Ifanela abasebenzisi beminyaka ehlukene futhi iyindlela eyisisekelo yokumnika.
Incazelo yesipetu esilahlwayo
1) Isipetu esilahlwayo esinezingxenye ezintathu, i-luer lock noma isiliphu se-luer.
2) Kuphasiswe ukuqinisekiswa kwe-CE ne-ISO.
3) Umgqomo osobala uvumela ukukalwa okulula kwevolumu equkethwe kusirinji.
4) Ukuthweswa iziqu okuphrintwe ngoyinki ongacimeki emgqonyeni kulula ukukufunda.
5) I-plunger ilingana kahle nengaphakathi lomgqomo ukuvumela ukunyakaza okushelelayo.
I-6) Izinto zomphongolo kanye ne-plunger: Ibanga lezinto ezibonakalayo PP (i-Polypropylene).
7) Izinto ze-gasket: I-Latex Yemvelo, Irabha Yokwenziwa (i-latex mahhala).
8) Imikhiqizo engu-1ml, 3ml, 5ml, 10ml eneBlister packing iyatholakala.
9) Inzalo ngegesi ye-EO, engeyona enobuthi futhi engeyona i-pyrogenic.
10) Izinto ezikhishwayo eziphansi kanye nokuchithwa kwezinhlayiyana.
11) Iwusizo futhi itholakala kalula.
12) Kulula ukuyisebenzisa.
13) Ezomnotho futhi alahlwayo.
14) Itholakala ngenguqulo engeyona oyinyumba neyinyumba.
15) Isirinji Ngamunye Ipakishwe.
16) Ingavuzi.Izobamba uketshezi ngaphandle kokuvuza.
17) Iyalahleka.Ukusetshenziswa kanye.Ibanga lobudokotela.
1. Sebenzisa kanye, ungaphindi usebenzise
2. Uma isikhwama se-PE siphukile, ungasisebenzisi
3. Phonsa imijovo esetshenzisiwe kahle
4. Gcina endaweni ehlanzekile neyomile
Le yindawo ka Origin I-Jiangsu, China Izitifiketi CE
Inombolo Yemodeli isipetu esilahlwayo I gama le-brand sugama
Okubalulekile I-PVC yebanga lezokwelapha(i-latex noma i-latex mahhala), i-PVC yebanga lezokwelapha(lati-ex noma i-latex mahhala) Uhlobo Lokukhipha Amagciwane Ngegesi ye-EO
Ukuhlukaniswa kwezinsimbi Ikilasi II Izinga lokuphepha AKUKHO
Into Uhlobo olujwayelekile olulahlwayo lwe-1cc 2cc isirinji yomjovo Isitifiketi Sekhwalithi akukho
Okunamathelayo I-epoxy resion isetshenziselwa ukulungisa ihabhu Uhlobo uhlobo olujwayelekile, uhlobo lokucisha ngokuzenzakalelayo, uhlobo lokuphepha
Impilo Yeshelufu 3 iminyaka Ukuvala inzalo Ngegesi ye-EO
Ukucaciswa Izingxenye ezimbili noma izingxenye ezintathu Isicelo Isibhedlela
Isinyathelo 1: Dweba umuthi usebenzisa inqubo ejwayelekile.
Isinyathelo sesi-2: Khumula isivikelo bese ujova usebenzisa amasu aseptic.
Isinyathelo sesi-3: Cindezela ngokugcwele i-plunger ukuze wenze kusebenze indlela yokubhidliza okuzenzakalelayo.
Isinyathelo sesi-4: Lahla isirinji esitsheni esibukhali.
Okwedlule: I-cotton roll
Olandelayo: Okugezekayo futhi okuhlanzekile 3000ml Umqeqeshi wokuphefumula okujulile onamabhola amathathu
Isirinji yokukhiya iLuer
isipetu esiyinyumba esilahlwayo esingu-5ml
Imininingwane Yomkhiqizo Amasirinji Alahlwayo Ezokwelapha anezakhiwo kanye nesakhiwo: Lo mkhiqizo wenziwe ngomgqomo, ipulangwe, ipiston kanye nenaliti. Lo mgqomo kufanele uhlanzeke futhi ube sobala ngokwanele ukuze ubonwe kalula. futhi kulula ukuyisebenzisa.Umkhiqizo uyasebenza ukusunduza ikhambi emthanjeni wegazi noma ongaphansi kwesikhumba, futhi ungakhipha igazi emzimbeni womuntu emithanjeni.